शरिरको तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी ६ खानेकुरा (तुरुन्तै पढेर सेयर गर्नुहोस्) - Nepali in Australia
July 1, 2021 July 1, 2021 autherLeaveaComment on शरिरको तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी ६ खानेकुरा (तुरुन्तै पढेर सेयर गर्नुहोस्)
लकडाउनका कारण धेरै ब्यक्तिको जीवनशैलीमै परिवर्तन आएको छ । घरमै बसेर नयाँ नयाँ परिकार बनाएर खाने, लामो समय टेलिभिजन हेर्ने, मोवाइलमा सोसल मिडिया हेर्ने, गेम खेल्ने, सुत्ने जस्ता कामहरु बढी हुन थालेकाले मानिसहरुमा मोटोपन पनि बढाइरहेको छ । मोटोपन बढेको कारण धेरैलाई चिन्ता भएपनि घटाउने उपायहरु अहिले लकडाउनका कारण पनि कम छन् । जिम, मर्निङ वाक, स्विमिङ, खेलकुद गतिविधिमा सहभागि हुन मिल्दैन भने घर भित्रै बसेर गर्न मिल्ने योग र कसरत पनि एक्लै गर्नुपर्दा कतिलाई झन्झटिलो लाग्छ ।
शरीरको तौल बढ्दा जो कोहीलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । अझ महिलाहरुलाई बढी चिन्तित बनाउने गर्छ । महिलाहरुको पेटमा लाग्ने बोसोले उनीहरुलाई बढी तनाव दिने गर्छ । ब्यायाम र योग गर्न पनि नचाहने र शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्यो भनेर चिन्तित हुने ब्यक्तिहरुले आफ्नो खानपिन शैलीलाई केही सुधार गरेर सन्तुलित भोजन लिएरपनि शरीरको तौल घटाउन सक्छन् । यसबारे हामीले केहि जानकारी प्रस्तुत गरेका छाैँ ।
दैनिक एक कचौरा दही सेवन गर्नाले तौल र पेटको बोसो कम गर्न सकिन्छ । यसमा क्याल्सियम, प्रोटीन, भिटामिन हुन्छ जसले वजन कम गर्नका साथै स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । दहीमा रहेको प्रो–बायोटिक ब्याक्टेरियाहरूले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । जसको कारण दहीले पेटका धेरै किसिमका समस्याहरुलाई समाधान गर्छ । यो वाहेक दहीले ग्याँस, कब्जियत तथा पेट फूल्ने समस्यालाई कम गर्छ ।
अण्डा प्रोटीनको उत्तम स्रोत हो । यसले शरीरको मेटाबोलिजम सुधार गर्दछ र पेटको बोसो कमगर्न मद्धत पुऱ्याउंछ । अण्डाले ऊर्जा दिन्छ, जसले अत्यधिक खाना सेवनलाई रोक्छ । तौल घटाउन अण्डाको सेतो भाग मात्र खानु पर्छ ।
केरा वजन कम गर्ने सही विकल्प हो । यसमा फ्याटको मात्रा कम र फाइबर तथा भिटामिनको मात्रा उच्च हुन्छ । केरामा रहेको डाइटरी फाइबरले पानी अवशोषण गर्दछ जसले पेटमा धेरै ठाउँं लिन्छ र यसले लामो समयको लागि अघाएको महसुस गराउदछ ।
यदि तपाई वजनसंगै पेटको बोसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान खाली पेटमा पानीको साथ कांचो लसुनको एक पोटी खानुहोस् । यतिमात्र नभइ, यदि तपाई उमालिएको पानीमा लसुनसंग कागतीको रस पिउनुहुन्छ भने तपाईले दुई गुणा छिटो तौल घटाउन सक्नुहुनेछ । लसुनको दैनिक सेवनले मेटाबोलिजम र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पुदिनाको सेवन गर्ने गर्नु भएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ पुदिना सेवन गर्नेहरुको शरीर
काठमाडौँ । गाढा हरियो रंगको तुलसी जस्तै स–साना पात हुने पुदिना वा पतिना प्रायः चटनी वा अचारको रुपमा खाने गरिएको वनस्पति हो । पुदिना नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशहरूमा प्रायः पाइन्छ ।
बाह्रै महिना चिसो स्थान ठाउँमा भइरहने प्रायः गर्मीतिर फुल्ने गर्दछ । अचार, तरकारी आदिको रुपमा प्रयोग गरिने पुदिना ताजा एवं सुकाएर दुबै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक भनाइमा पुदिना स्वेद कारक, उष्ण, दीपन, एवं वायु कफनाशक, भोक बढाउने, मलमूत्रजन्य रोग रोकथाम गर्ने आदि गुणले भरिएको हुन्छ । यो खोकी, अजीर्ण लगायत विविध पेटका रोगहरुमा गुणकारी छ ।
विभिन्न रोगमा पुदिनाको प्रयोग : अपच:दिनहुँ खानाको साथमा आधा चम्चा पुदिनाको रस वा ५/६ वटा ताजा पुदिनाको पात वा केही मात्रामा यसको अचार खाएमा अपच भएको अवस्थामा फाईदा हुन्छ ।पेट फुल्ने:पेट फुल्ने वा अजीर्ण भएमा पुदिनाको १–२ चम्चा रस, केही मात्रामा बीरेनून राखी ४ गुणा मनतातो पानीसँग खाँदा पेट फुलेको ठीक हुन्छ ।
क्यान्सर:पुदिनाको ताजा वा सुकेको पातलाई चिया, सर्बत, चटनी आदि कुनै न कुनै रूपमा सेवन गरेमा क्यान्सरको शुरु अवस्थामा यसले औषधि जस्तै काम गर्दछ । दिनको १०/१५ वटा ताजा पातलाई थिचेर पानीमा मिसाई मह वा थोरै कागती र नून मिसाई दिनको २–३ पटक केही महिनासम्म खुवाउन सकिन्छ ।
काटेको घाउमा:कुनै अंगमा घाउ भएमा वा काटेको ठाउँमा रगत बग्न नरोकिएमा घाउ सफा गरी पुदिनाको पातलाई राम्ररी पखाल्ने र त्यसको रस निकाली लगाउँदा घाउमा रगत थामिन्छ र छिटो निको पार्न समेत मद्दत गर्छ ।
मुर्छा:सामान्य कारणले कुनै व्यक्ति मुर्छा वा बेहोस् भएको छ भने पुदिनाको पातलाई माडेर केहीबेर सुँघाइदिँदा होस आउँछ ।ज्वरो:पुदिनाको रस निकाली आधादेखि २ चम्चासम्म रसलाई पानी मिसाई खानदिँदा ज्वरो घटद्छ ।पेट दुखाइ:पुदिनाको पातलाई पानीमा पकाउँने, पानी सुकेर रहेको चौथाइ मात्रालाई विहान पिउँदा पेटको दुखाइमा आराम हुन्छ ।दम र खोकी:पुदिनाको पात पानीमा पकाइ पिउँदा दम र खोकीमा सुधार हुन्छ । घाँटी बढी खसखस भएर खोकी लागेमा पनि यसको प्रयोगले फाइदा पुग्छ ।
अक्सिजन लेभल कम भएपछि पिपलको रुखमुनी बसे कोरोना संक्रमित, भने- निक्कै सहज महसुस भयो